ari kushandisa michina yemitemo-yakavakirwa mabasa nekushandisa kweyakaomesesa software mhinduro dzinoderedza kutsamira kwevanhu pane chinowanzoitwa basa. Uchibatsirwa neRPA, unogona kubata aripo madhatabhesi muzvishandiso ( CRMs , ERPs, Customer Support Systems, nezvimwewo) pasina kugara uchitariswa. Nekushandisa chakagadzirwa njere, izvi softwares Vanogona kudzidza kubva pamhinduro dzazvino uye vozvivandudza. At NewGenApps isu takagadzira iyo kushandisa michina chikuva icho chisingagone chete anouya ne kushandisa michina mhinduro asiwo neane hungwaru chatbot maturusi. RPA neAI yakagonesa matekinoroji ari kugadzira mikana mikuru ye bhizimisi kukura uye kugadzira mitsva mitsva nemikana. Mabhizinesi anofarira kuongorora kugona kweazvino mhinduro dzeAI uye kuona mabhenefiti avo.
Mari yakaitika bhizimisi mashandiro akaderedzwa zvakanyanya sezvo software imwe inokwanisa kubata basa revashandi vazhinji. Izvi zvinochengetedza nguva yevashandi kune mamwe mabasa akaomarara. Panewo mari shoma inoshandiswa pakuhaya nekuchengetedza vashandi.
Iwe haufanire kuhaya vashandi vatsva pese panenge paine spurt mu data. Robhoti / Softwares yakagadzirirwa mabasa akadaro anokwanisa kubata ese marudzi ekukwira nekudzika mu data. Icho chokwadi chekuti iwe unogona kushandisa zvakadaro kushandisa michina software 24 * 7 uye 365 mazuva pagore, mukana wakakura.
Kuchengeta izvi bhizimisi zvinangwa mupfungwa, NewGenApps yakagadzira chizvarwa chitsva kushandisa michina chikuva chekubatsira mabhizinesi kuita izvi. Isu takabatsira Mabhizinesi kuderedza mutengo wekushanda nepamusoro pe40% uye kuwedzera bhizimisi kukosha kuburikidza neMutengo-kuchengetedza, Kuwedzera mukubudirira, Kuderedza nguva dzekuchinja, Kuwedzera kugona kwemaitiro etc. Neboka rakazvitsaurira rine ruzivo Developers, isu tinokwanisa kuwedzera matekinoroji emazuva ano kukuunzira iwe mhedzisiro yakanaka. Our kushandisa michina Platform ine hunyanzvi hwekupa -
1. Deterministic rule-based kushandisa michina (RPA)
2. chakagadzirwa Intelligence uye Machine kudzidza inogonesa mhinduro.
3. Intellibot: A Chatbot chikuva kugadzira nyore chatbots mumaminitsi.